Ndị na-emepụta nkata Waya & Ndị Na - eweta ya - China Nkata Nkata Wirelọ Ọrụ
303 Series clip-nke dị warara wepụta ihe na-adọrọ ihe nkata
Okwu Mmalite: 303 Series clip-nke dị warara wepụta ihe na-adọrọ ihe nkata. Ha dị mfe iji wụnye na Mee N'onwe Gị enyi na enyi. Gaa na weebụsaịtị anyị iji họrọ usoro ị ga-achọ. Ngwaahịa anyị nwere ike ahaziri dịka ihe ị chọrọ. Ajụjụ ọ bụla biko chere free ịkpọtụrụ anyị.
Nkebi Nke.: 303
310 Series side Mount nkịtị soft mmechi metal eji waya nkata drawer
Okwu Mmalite:310 Series akụkụ ugwu nkịtị soft mechie metal eji waya nkata drawers. Ha dị mfe iji wụnye na Mee N'onwe Gị enyi na enyi. Gaa na weebụsaịtị anyị iji họrọ usoro ị ga-achọ. Ngwaahịa anyị nwere ike ahaziri dịka ihe ị chọrọ. Ajụjụ ọ bụla biko chere free ịkpọtụrụ anyị.
312 Series elliptical ewepụghị ígwè warara chrome dọpụtaara eriri nkata drawer maka kichin kabinet
Okwu Mmalite:312 Series elliptical ewepụghị ígwè warara chrome dọpụtaara eriri nkata drawer maka kichin kabinet. Ha dị mfe iji wụnye na Mee N'onwe Gị enyi na enyi. Gaa na weebụsaịtị anyị iji họrọ usoro ị ga-achọ. Ngwaahịa anyị nwere ike ahaziri dịka ihe ị chọrọ. Ajụjụ ọ bụla biko chere free ịkpọtụrụ anyị.
Nkebi Nke.: 312
321 Series side n'ịnyịnya dọpụtaara metal eji eriri nkata drawer maka kichin cabinets
Okwu Mmalite:321 Series side n'ịnyịnya dọpụtaara metal eji eriri nkata drawer maka kichin cabinets. Ha dị mfe iji wụnye na Mee N'onwe Gị enyi na enyi. Gaa na weebụsaịtị anyị iji họrọ usoro ị ga-achọ. Ngwaahịa anyị nwere ike ahaziri dịka ihe ị chọrọ. Ajụjụ ọ bụla biko chere free ịkpọtụrụ anyị.
Nkebi Nke.: 321
322 Series nnukwu & obere abụọ oyi akwa n'akụkụ ugwu ugwu eji waya nkata drawer
Okwu Mmalite: 322 Series nnukwu & obere akwa oyi akwa n'akụkụ ugwu metal eji waya nkata drọwa maka kichin oche. Ha dị mfe iji wụnye na Mee N'onwe Gị enyi na enyi. Gaa na weebụsaịtị anyị iji họrọ usoro ị ga-achọ. Ngwaahịa anyị nwere ike ahaziri dịka ihe ị chọrọ. Ajụjụ ọ bụla biko chere free ịkpọtụrụ anyị.
Nkebi Nke.: 322
325 Series nnukwu & obere abụọ oyi akwa n'akụkụ ugwu ewepụghị ígwè waya nkata drawer
Okwu Mmalite: 325 Series nnukwu & obere uzo abuo n’akuku ugwu dijitalụ waya waya nkata drawer maka kichin cabinets Ha dị mfe iji wụnye na Mee N'onwe Gị enyi na enyi. Gaa na weebụsaịtị anyị iji họrọ usoro ị ga-achọ. Ngwaahịa anyị nwere ike ahaziri dịka ihe ị chọrọ. Ajụjụ ọ bụla biko chere free ịkpọtụrụ anyị.
Nkebi Nke.: 325
331 Series abụọ oyi akwa n'akụkụ ugwu metal eji waya nkata dọpụtaara drọwa
Okwu Mmalite: 331 Series abụọ oyi akwa n'akụkụ ugwu metal eji waya nkata dọpụtaara drọwa maka kichin cabinets. Ha dị mfe iji wụnye na Mee N'onwe Gị enyi na enyi. Gaa na weebụsaịtị anyị iji họrọ usoro ị ga-achọ. Ngwaahịa anyị nwere ike ahaziri dịka ihe ị chọrọ. Ajụjụ ọ bụla biko chere free ịkpọtụrụ anyị.
Nkebi Nke.: 331
332 Series kichin kabinet n'akụkụ ugwu waya nkata dọpụta drawer
Okwu Mmalite: 332 usoro kichin kichin n'akụkụ ugwu waya nkata weputa drawer maka kichin kichin. Ha dị mfe iji wụnye na Mee N'onwe Gị enyi na enyi. Gaa na weebụsaịtị anyị iji họrọ usoro ị ga-achọ. Ngwaahịa anyị nwere ike ahaziri dịka ihe ị chọrọ. Ajụjụ ọ bụla biko chere free ịkpọtụrụ anyị.
Nkebi Nke.: 332
341 usoro ihe eji eme ihe eji esi okpukpu okpukpu okpukpu kporo ya na kichin
Okwu Mmalite: 341 usoro ihe eji eme ihe eji esi okpukpu okpukpu okpukpu kporo na kichin maka kichin. Ha dị mfe iji wụnye na Mee N'onwe Gị enyi na enyi. Gaa na weebụsaịtị anyị iji họrọ usoro ị ga-achọ. Ngwaahịa anyị nwere ike ahaziri dịka ihe ị chọrọ. Ajụjụ ọ bụla biko chere free ịkpọtụrụ anyị.
Nkebi Nke.: 341
351 Series n'akụkụ ugwu waya nkata drawer na 18 ”adụ nso zoro ezo slide
Okwu Mmalite: 351 Series n'akụkụ ugwu waya nkata drawer na 18 ”adụ nso zoro ezo slide. Ha dị mfe iji wụnye na Mee N'onwe Gị enyi na enyi. Gaa na weebụsaịtị anyị iji họrọ usoro ị ga-achọ. Ngwaahịa anyị nwere ike ahaziri dịka ihe ị chọrọ. Ajụjụ ọ bụla biko chere free ịkpọtụrụ anyị.
Nkebi Nke.: 351
401 Series 2 oyi akwa grid ụdị chrome wepụ waya nkata drọwa na ala ugwu drawer ndu
Okwu Mmalite: 401 Series 2 oyi akwa grid ụdị chrome wepụ waya nkata drọwa na ala ugwu drawer ndu. Ha dị mfe iji wụnye na Mee N'onwe Gị enyi na enyi. Gaa na weebụsaịtị anyị iji họrọ usoro ị ga-achọ. Ngwaahịa anyị nwere ike ahaziri dịka ihe ị chọrọ. Ajụjụ ọ bụla biko chere free ịkpọtụrụ anyị.
Nkebi Nke.: 401
402 Series gridwall buputa ihe eji ihe ntanye ihe nkata
Okwu Mmalite: 402 Series gridwall buputa ihe eji ihe ntanye ihe nkata. Ha dị mfe iji wụnye na Mee N'onwe Gị enyi na enyi. Gaa na weebụsaịtị anyị iji họrọ usoro ị ga-achọ. Ngwaahịa anyị nwere ike ahaziri dịka ihe ị chọrọ. Ajụjụ ọ bụla biko chere free ịkpọtụrụ anyị.
Nkebi Nke.: 402